विचित्र संसार – YesKathmandu.com
एस काठमाडौं आइतबार २१, कार्तिक २०७३
काठमाडौं । नेपालभरि आलोचित भइरहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तस्विर अहिले एक ‘आइटम गर्ल’को शरीरमा टाँसिन पुँगे सँगै सो तस्विर भाइरल बनेको छ । यससँगै, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फोटो भएको कपडा लगाएकी भारतीय आइटम गर्ल…
लास बोकेको दृश्य फिल्म, नाटक वा रंगीन दुनियाँमा देख्दा कत्ति पीडा हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ दर्शकमा नै सिमित छ । तर, मंगलबार दिउँसो यस्तै वास्तविक घटना घटेको छ । यो नत फिल्मको सुटिङ हो…
एस काठमाडौं शनिबार १८, असार २०७३
महिलाहरु आफ्नो श्रीमानले आफु भन्दा अरु केटीमा नजर नलगाओस भन्ने चाहन्छन । अरु केटिसंग सल्केको सुइँको पाउने बितिकै उनीहरुको रिसको पारो चढ्छ । त्यसो त हालै चीनमा अन्हुइ प्रान्तको बोझोउमा एउटा यस्तै घटना भएको छ । त्यहाँ एक महिलाले आफ्ना…
एस काठमाडौं सोमबार २४, जेठ २०७३
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा कुखुराले संसारकै सबैभन्दा सानो अण्डा पारेको छ । सानो अण्डा पारेपछि गिनिज बुकमा लेखाउने प्रयास थालिएको छ । सन्धिखर्कका कृषक हरिप्रसाद अधिकारीले गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा उल्लेख गरेकोभन्दा सानो अन्डा आफ्नो कुखुराले…
सय वर्ष पछि फेरि विहे !
एस काठमाडौं बुधबार १५, बैशाख २०७३
झट्ट सुन्दा पत्यार लाग्दैन । उमेर पुगेपछि बिहे हुन सामाजिक संस्कार नै हो । तर, बरबोटे गाविस इलाममा मंगलबार यस्तो विहे आयोजना गरियो, जहाँ निम्तो मान्नभन्दा रमिता हेर्न पुगेकाहरु खचाखच थिए । निम्तालु र आगन्तुकले…
एस काठमाडौं बिहीबार ०९, बैशाख २०७३
दोलखा, ९ बैशाख । उमेरले बिहे गर्ने समय घर्किसकेको भएपनि थामी जातिका युवायुवतीले आफ्नो बिहे अघि आमाबुबाको बिहे सम्पन्न गर्नुपर्छ । थामी जातिको धार्मिक संस्कारअनुसार बाबुआमाको बिहे नगरी छोराछोरीको बिहे गर्ने बेला बिते पनि परम्पराअनुसार…